Kubukeka kanje uma usekamelweni likaDonald Trump | Scrolla Izindaba
Kubukeka kanje uma usekamelweni likaDonald Trump
UMengameli uDonald Trump usanqaba namanje ukwamukela ukuthi wehluliwe okhethweni lwangesonto eledlule.
Uqoqe izigidi zamadola kubasekeli bakhe ukusiza ukulwa nemiphumela yokhetho ezifundazweni eziningi. Awekho amacala akhe asaphumelele.
Kuleli sonto uTrump uxoshe abantu asebekhulile abaningana abasebenzela uhulumeni kanye nobuholi bezempi, wafaka abanye esikhundleni sabo – abantu abathembayo.
Ababhikishi abangaphandle kwe-White House, njengoba kuvezwe ngenhla, bakhombisa umbono womhlaba wonke wokuthi sekuyisikhathi sokuthi apakishe izikhwama zakhe ahambe.